admin – प ृष्ठ 8 – Nepal
मार्च 20, 2018 admin	Comment(0)
दरबारमार्ग बलात्कार घटनाका मुख्य आरोपी पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले २२ वर्षीय शैलेस कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो। कार्कीलाई काठमाडौंको दरबारमार्गबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौंका एसएसपी विश्वराज पोखरेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनालाई आर्थिक लेनदेनमा मिलाएको आरोपमा महानगरीय प्रहरी बृत्त दरबारमार्गका डिएसपी तिलक, इन्स्पेक्टर लक्ष्मणसिंह ठकुरी समेत कारबाहीमा परेका थिए। गत […]
इराकमा अपहरणमा परेका ३९ भारतीयको हत्या !!
सन् २०१४ मा इराकमा अपहरण गरी बेपत्ता बनाइएका ३९ जना भारतीय नागरिकको हत्या भएको समाचार छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले मङ्गलबार सो कुराको पुष्टि गर्नुभएको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । भारतीय संसद्मा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले इराकमा तीन वर्षअघि निर्माणसम्बन्धी काममा कार्यरत ३९ जना भारतीय नागरिकको इस्लामिक स्ट्टेस (आइएस)ले हत्या गरेको पुष्टि […]
सीमा नाकाबाट ६ चेलीको उद्धार !!
मार्च 19, 2018 admin	Comment(0)
कपिलवस्तु – राम्रो जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारी बिचौलियाले भारत हुँदै तेस्रो मुलुक लैजान लागेको अवस्थामा यहाँको यशोधरा गाउँपालिकास्थित मर्जादपुर सीमा नाकाबाट आइतबार ६ युवतीको उद्धार गरिएको छ। विदेशमा राम्रो जागिर खाने प्रलोभनमा परेर अवैध रूपमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जान लागेका ती युवतीलाई प्रहरीले उद्धार गरेको हो। सुराकीका आधारमा सीमा नाकाबाट कपिलवस्तुकै दुई र अन्य […]
मार्च 18, 2018 admin	Comment(0)
भक्तपुर– भक्तपुरको निकोसेरामा भएको स्कुटर दुर्घटनामा परी एकजनाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं ६ थिमिबाट निकोशेरातर्फ आउँंदै गरेको बा ५५ प १६४ नम्वरको स्कुटर अनियन्त्रित भई सडक छेउको विजुलीको पोलमा ठोक्किन गई दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परी भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ३ खौमा वस्ने वर्ष २२ को सुशन स्वंगमिखाको मृत्यु भएको […]
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएका छन् । बेल्जियमको एक अदालतले १५६ मिलियन अमेरिकी डलर (१६ अर्ब बढी नेपाली रुपैयाँ) बराबर जरिवाना तोकेको हो । गोपनियातासँग सम्बन्धित कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै फेसबुकमाथि १६ अर्ब रुपैयाँ बढीको जरिवाना तोकिएको छ । फेसबुकले ‘थर्ड पार्टी’ तेस्रो पक्षीय अनलाइनहरुलाई ट्र्याक गरेर गोपनियतासँग सम्बन्धित कानून उल्लङ्घन गरेको अदालतको ठहर […]
सरकारले तीन साता नपुग्दै मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ। साविकका तीन मन्त्रालय फुटाएर २० वटा पुर्‍याइएको हो। अब संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय रहनेछन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय थिए। तीन साताअघि मात्रै ३० वटा मन्त्रालयलाई १७ वटामा झारिएको थियो। सरकारले साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय फुटाएर […]
मार्च 16, 2018 admin	Comment(0)
मार्च 16, 2018 मार्च 16, 2018 admin	Comment(0)
विश्वकप क्रिकेट छनोटको बिहीबार भएको प्लेअफमा पपुवा न्यूगिनीलाई ६ विकेटले हराउँदै नेपाल एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता नजिक पुगेको छ। जिम्बाव्वेको हरारेमा सम्पन्न खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई ११४ रनमा रोकेपछि नेपालले १६२ बल खेल्नुअगावै २३ औं ओभरमा सजिलै विजय प्राप्त गरेको हो। सुपर सिक्सभित्र नपरेका राष्ट्रबीच भइरहेको प्लेअफमा नेदरल्याण्ड्स र हङकङको खेलको नतिजाले नेपालले मान्यता पाउने वा नपाउने […]
अघिल्लो 1 …789… 11 अर्को